Ndị na-ehicha oghere dị ọnụ ala kacha mma 2022: ntuziaka ịzụrụ na onyinye dị ịtụnanya
ọnụ ala agụụ ihicha
Dị ọnụ ala karịa
Site na ika
Agụụ agụụ Cleaner robot
na mmiri nyo
nke mmiri mmiri
Maka anụ ụlọ
site na ntụ
nke ụgbọ ala
Obere vacuum Cleaner
Ị chọrọ zụta ihe mkpocha ọkụ dị ọnụ ala? Ahịa vacuum Cleaner etoola n'ike n'ike kemgbe ọtụtụ afọ. Anyị enweela ike ịhụ ka nhọrọ nke ndị na-ehicha ọkụ na ahịa si eto. A na-enwewanye ụdị na ụdị dị iche iche dị. Ha niile nwere njirimara nke ha na n'ọtụtụ ọnọdụ ha nwere ihe ndị ọzọ a kapịrị ọnụ, mana nhọrọ ahụ ka sara mbara karị. Yabụ na ndị ọrụ nwere ọtụtụ nhọrọ ịhọrọ.
Mgbe anyị na-aga ịzụta ihe mkpocha ọhụrụ, nhọrọ ahụ nwere ike ịdị mgbagwoju anya. Agbanyeghị na enwere akụkụ abụọ nke ndị ahịa ọ bụla chọrọ. Anyị chọrọ igwe nhicha dị mma mana nke na-adịghị oke ọnụ. Nke ahụ na-abụkarị ọchịchọ nke ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị mmadụ. N'ihi nke a, anyị na-ahapụ gị n'okpuru ebe a na nhọrọ nke ọnụ ala vacuum Cleaners.
Ha niile bụ ezigbo ụdị mana enwere ike ịnweta ọnụ ahịa ha. Nke mere na imeghari ihe nchacha agụụ gị anaghị eche na ị ga-agba mbọ karịrị akarị. Anyị na-agwa gị ihe gbasara ụdị ndị a niile n'okpuru.
Ndị na-ehicha oghere dị ọnụ ala kacha mma
Anyị emeela nhọrọ nke ọtụtụ ụdị. Ha niile bụ ụdị nke pụtara maka inwe ọnụ ahịa dị ukwuu maka ndị ọrụ, mana na-enweghị nke a pụtara ịhapụ ịdị mma. N'okpuru ebe a, anyị na-ahapụ gị na tebụl nke nwere nkọwa zuru ezu nke nke ọ bụla n'ime ụdị ndị a. Mgbe tebụl ahụ gasịrị, anyị na-ekwu banyere onye ọ bụla n'ime ha n'otu n'otu n'ụzọ zuru ezu karị.
N'ihi data ndị a ị nwere ike nweta echiche doro anya banyere ụdị ihe nlereanya nwere ike ịbụ nke kacha amasị gị ịzụrụ.
Cecotec Robot Vacuum Cleaner na ...
Mkpuchi Robot F1 Lefant...
Vacuum broom enweghị ...
Rowenta XPert 3.60 Flex
Obodo nna Taurus enweghị njedebe -...
Cecotec Vacuum Cleaner na-enweghị ...
Ike Rowenta Swift ...
AEG LX7-2-EB-P oghere...
1 Ndị na-ehicha oghere dị ọnụ ala kacha mma
2 Ndị na-ehicha oghere dị ọnụ ala kacha mma
2.4 Rowenta kọmpat ike Cyclonic RO3753
2.7 AmazonBasics Canister Vacuum
2.8 VicTsing Cordless Vacuum Cleaner
3 ụdị aspirator
3.3 ígwè ọrụ na-
3.6 site na ntụ
3.7 2 na 1
3.8 enweghị akpa
3.9 Nke mmiri
4 Ụdị kacha mma vacuum Cleaner
5 Otu esi ahọrọ ihe nchacha agụụ
5.3 Ụdị nzacha
5.5 Ọ dịghị ihe na-eme ka ị kwenye?
Ozugbo egosipụtara nkọwa kachasị mkpa nke onye ọ bụla n'ime ihe ndị a na-ehicha oghere, anyị nwere ike ịga n'ihu ikwu banyere nke ọ bụla n'ime ụdị ndị a na omimi karị. N'ụzọ dị otú a, ị nwere ike ịmụtakwu banyere ụdị ndị a na ọrụ ha. Ya mere, ọ bụrụ na e nwere nke dabara gị mkpa, ị ga-enwe ike ịmata ya ozugbo.
Anyị na-eji igwe nhicha rọbọt nke Cecotec mepere ndepụta a, akara ama ama na ngalaba maka imepụta ihe nhicha rọbọtụ dị iche iche. Ọ bụ ihe nlereanya na, dị ka robots niile, bụ nhọrọ dị mma nke ukwuu. N'ihi na ihe anyị ga-eme bụ ịhazi ya wee malite ihicha ala ụlọ anyị. Ọ na-ehicha ya ugboro anọ ma nwee ngụkọta nke ụdị nhicha 6. Ọ bụghị naanị na ọ na-ekpochapụ, kamakwa ọ na-ekpocha ma na-ekpochapụ. Ya mere, rụọ a zuru oke ihicha ụlọ. Na mgbakwunye, ọ na-arụ ọrụ nke ọma na ụdị ala niile.
Mgbe ị na-ehicha ụlọ, ekele maka nkà na ụzụ ya, ọ gaghị adaba na ngwá ụlọ, ndị mmadụ, nkuku ma ọ bụ daa na steepụ. Ya mere, anyị nwere ike ịnọdụ ala ma hapụ robot ka ọ rụọ ọrụ ya. Ọ nwere batrị na-enye ya ohere nke nkeji 160. Mgbe batrị na-achọ ịgwụ, rọbọt ahụ na-alọghachi ozugbo na ntọala ya iji chajịa nke ọma. Yabụ na anyị ekwesịghị ichegbu onwe anyị maka nke ahụ. Ọ nwere nnukwu tank nke na-enye anyị ohere ikpochapụ ụlọ ahụ dum n'enweghị mkpa ịkwapụ ya.
Dị ka nzacha ọ nwere ihe nzacha HEPA, nke a pụtara na anyị nwere ike ihicha ya ngwa ngwa. Naanị tinye ya n'okpuru mgbata ma hapụ ya ka ọ kpọọ nkụ. Ya mere, ọ dịlarị ọcha ma dị njikere iji ya mee ihe ọzọ. Ọ bụ usoro dị mma nke na-enye anyị ohere ịchekwa ego na nzacha. Robot a pụtakwara n'ihi na ọ naghị eme mkpọtụ. Robot na-abịa na ngwa gụnyere ọtụtụ brushes, chaja base base, remote control na ihe nkwụnye ọkụ.
Ọ bụ ezie na ọ bụghị naanị na ndepụta a ga-abụ, otu n'ime ihe ndị pụtara ìhè nke Ecovacs floor Cleaner bụ na ọ dakọtara na Alexa na ngwa mkpanaka, n'ihi ya, anyị nwere ike ịma ebe ọ nọ mgbe niile. Na mgbakwunye, ọ nwekwara ụdị ọgụgụ isi ọzọ, na nke a Smart Navi 3.0 Navigation na-arụ ọrụ ekele maka laser na-enye gị ohere ịmata ebe ị na-aga na. mepụta maapụ ụlọ anyị.
Dịka anyị kwurula, jiri ngwa ECOVACS Enwere ike ịmepụta ihe mgbochi mebere site na mkpanaka ibute ụzọ ma ọ bụ gbochie mpaghara ka robot wee kpochaa naanị ebe anyị chọrọ. N'aka nke ọzọ, anyị nwere ike iji otu n'ime ụzọ ihicha anọ ya iji hụ na ọ na-ehicha ebe, otú na mgbe anyị chọrọ.
N'ebe nke abụọ anyị na-ahụ ihe nlereanya a site na otu ika ahụ, n'agbanyeghị na oge a ọ bụ 2-in-1 vacuum Cleaner. sofa ma ọ bụ oche ụgbọ ala. N'ihi nke a, anyị nwere ike ịrụ ọtụtụ ihe dị omimi nke ụlọ. Ọ pụtara maka iji teknụzụ cyclonic, teknụzụ na-enye ya ike dị ukwuu. Tụkwasị na nke a, nke a pụtara na ọ naghị efunahụ ike karịa oge. Ihe na-enye ọtụtụ udo nke uche nye ndị ọrụ.
Ọ bụ ihe nlereanya ọkụ ma dị mfe iji n'ụlọ. Ọ dị ntakịrị, nke na-eme ka ọ dị mfe ijikwa ya. Karịsịa ma ọ bụrụ na anyị nwere ụlọ nwere steepụ, nke mere na ọ bụghị ihe siri ike iburu ya site n'otu ebe gaa n'ọzọ. Ihe nlereanya a na-arụ ọrụ na eriri, na eriri nke o nwere jikoro 6 mita. Ya mere, anyị nwere ike ịgagharị n'ụlọ ahụ nke ọma na n'etiti ọnụ ụlọ na-enweghị ike ikwunye na iwepụ ya mgbe niile. Na mgbakwunye, ihe nhicha broom a na-arụ ọrụ nke ọma n'ụdị elu niile, gụnyere ala osisi.
Ọ nwere nkwụnye ego nwere ikike nke 1 lita. Nke a na-enye anyị ikike zuru oke iji ihicha ụlọ ahụ ihe karịrị otu oge n'enweghị nsogbu ọ bụla. Tụkwasị na nke ahụ, mmịpụta nke tank ahụ dị nnọọ mfe na nke ahụ bụ otú anyị si ehicha ya. Nke a na-emekwa na nzacha, nke mmezi ya dị mfe. Ebe ọ bụ nzacha HEPA. Ya mere, naanị anyị ga-asachapụ ha. N'ihe banyere mkpọtụ, ọ bụghị nke kacha nwee uche, mana ọ na-ebute otu ụda mkpọtụ dị ka ihe nhicha nkịtị. Ọ dị mfe ịchekwa n'ihi na ọ naghị ewe ohere ọ bụla. Ihe nhicha a na-ekpo ọkụ na-abịa na ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ agbakwunyere gụnyere.
Rowenta kọmpat ike Cyclonic RO3753
N'ebe nke atọ, anyị na-ahụ ihe mkpochapụ Rowenta nke ọdịnala, opekata mpe n'ihe gbasara imewe. Ọ na-eji teknụzụ cyclonic eme ihe, nke na-enye ya ike dị ukwuu na ike ịmị. Na mgbakwunye, ọ naghị atụfu ike a ka oge na-aga. Ya mere, anyị nwere ike ịnụ ụtọ ojiji ya ruo ogologo oge na nkasi obi kachasị. Nkwa dị mkpa maka ọtụtụ mmadụ. Ọ na-arụ ọrụ nke ọma n'ụdị elu niile, ma karịsịa na ala siri ike (nkume, tile ...). Ya mere, ọ bụrụ na ị nwere ụdị ala ahụ, ọ bụ ezigbo ihe na-ehicha ọkụ maka ha.
Rowenta RO3753 kọmpat ...
Ọ na-arụ ọrụ na tank nwere ikike nke 1,5 lita nke anyị nwere ike ikpochapụ ngwa ngwa. Na mgbakwunye, ọ bụ ego zuru oke iji nwee ike ihicha ụlọ ahụ dum n'enweghị nsogbu ọ bụla. O nwekwara ihe nzacha HEPA, nke pụtara na anyị nwere ike ịsacha ya. Naanị tinye nzacha n'okpuru mgbata iji wepụ unyi. Ozugbo emechara nke a, anyị na-ahapụ ya ka ọ kpọọ nkụ ma tinyeghachi ya na ihe mkpofu. Ihe ndị a niile na-enweghị mgbe ọ bụla ịla n'iyi ike. Ihe nhicha nke Rowenta bụ eriri, ọ nwere eriri mita 6,2. Nke a na-enye anyị ohere ịgagharị n'ụlọ ahụ n'ụzọ dị mfe.
Ọ dị kilogram 6,8, mana ekwela ka ọnụ ọgụgụ ahụ ghọgbuo ya, n'ihi na ọ bụ ihe nlereanya dị mfe ijikwa na ịgagharị n'ụlọ. N'ihi imewe ya na wiil, ọ bụ ihe na-ehicha oghere nke ukwuu. Tụkwasị na nke a, mgbe a bịara n'ichekwa, ọ naghị ewepụta ohere dị ukwuu, ya mere ọ dị mfe ịchọta ebe ị ga-echekwa ya. Ọ na-emepụta otu mkpọtụ dị ka ihe na-ehicha oghere nkịtị, yabụ na ọ nweghị ihe ịtụnanya n'akụkụ ahụ. Ọ bụghị mkpọtụ na-akpasu iwe.
N'ebe nke anọ, anyị na-ahụ ihe nhicha a na-ekpo ọkụ nke isi ya ga-abụ dị ka ihe mkpocha ụlọ ọrụ mmepụta ihe, n'agbanyeghị na anyị nwere ike iji ya n'ọtụtụ ọnọdụ dị iche iche. Ma, ọ pụtara karịsịa n'ihi na ọ bụ nnọọ ike nlereanya na-enye oké mmiri ike. N'ụzọ dị otú a, ị ga-enwe ike iwepụ unyi niile na-akwakọba n'ụzọ dị mfe ma dị irè. Tụkwasị na nke ahụ, ọ na-arụkwa ọrụ na unyi mmiri, ya mere ọ na-enye anyị ohere ọtụtụ ihe eji eme ihe karịa onye na-ehicha ọkụ na nke a. N'ihi ya, ọ bụ otú vasatail.
O nwere nnukwu tank ikike, nke mere e ji mee ya maka ụlọ ọrụ mmepụta ihe ebe ọtụtụ unyi na-akwakọba. Nke a na-enye anyị nhọrọ nke inwe ike ihicha oghere buru ibu na-enweghị ịwụpụ kwa nkeji ole na ole. Ya mere ihicha na-arụ ọrụ nke ọma n'ụzọ ọ bụla. Na mgbakwunye na ikpochapu, ọ nwekwara ọrụ ịfụ nke na-arụ ọrụ nke ọma. Ya mere, ị nwere ike rụọ ọrụ nhicha dị omimi karị.
Ọ bụ ihe nlereanya nke nwere ibu nke 7,66 kg. Ma, n'agbanyeghị ọnụ ọgụgụ a, ọ bụ ihe nlereanya anyị nwere ike ijikwa nke ọma. Tụkwasị na nke ahụ, n'ihi nhazi ụkwụ anọ ya, ọ dị nnọọ mkpagharị ma kwụsie ike. Ya mere, ọ gaghị ada ma ọ bụ daa n'oge ọ bụla ka anyị na-eji ya. Ya mere, anyị na-eche naanị banyere ihicha. O nwere eriri nwere ogologo mita anọ. Ọ bụghị nke kachasị ogologo, mana ọ na-enye anyị njem njem zuru oke.
Emebere Braava 390t a iji hichaa ọtụtụ nnukwu ọnụ ụlọ. O nwere ngafe nchacha nke okpukpu atọ yana iadapt 2.0 nwere cubes igodo na-enyere obere rọbọt a aka idebe ọnọdụ ya. Dịka nhọrọ, anyị nwere ike họrọ otu ngafe ma ọ bụrụ naanị na anyị chọrọ iwepụ unyi, uzuzu, ntutu anụ ụlọ anyị na ihe allergens ma ọ bụ jiri ngafe atọ ya na-ehichapụ ruo 33m².
iRobot Braava 390t, robot ...
Banyere ihe ndị ọzọ, ọ gụnyere akwa microfiber 4, nke abụọ bụ maka ịchacha na abụọ maka mopping, nke pụtara na. nwere ike kpoo mop.
AmazonBasics Canister Vacuum
Ihe nlereanya na-esonụ bụ ihe mkpocha agụụ na-emekarị ka ọ pụta ìhè maka ịrụ ọrụ nke ọma na enweghị nsogbu. Ọ bụ ihe atụ kpochapụwo nke ukwuu nke a ga-eji na-arụ ọrụ nhicha ụlọ. Ọ na-enye anyị ohere ikpochapụ n'ụdị ala niile ma nwee ike zuru oke. Ọ bụghị nke kachasị ike na listi ahụ, mana ọ naghị ahapụ unyi ọ bụla na-enweghị ikuku n'oge ọ bụla. Ya mere ọ na-arụzu ọrụ ya nke ọma mgbe niile.
Basics Amazon –...
O nwere tank nke nwere ikike nke 1,5 lita, nke na-enye anyị ohere ikpocha ụlọ ahụ ọtụtụ ugboro ruo mgbe o juputara. Mwepụta na nhicha nke nkwụnye ego a dị nnọọ mfe. Yabụ na ọ chọghị nrụzi nke ukwuu. Otu ihe ahụ na-eme na nzacha HEPA nke ọ gụnyere. Mgbe anyị chọpụtara na ọ nwere oke unyi na-akwakọba, ọ kacha mma ka mmiri ya, hapụ ya ka ọ kpọọ nkụ ma jiri ya mee ihe ọzọ. N'ụzọ dị otú a ọ na-alọghachi ka ọ nwee ike ịṅụ mmiri kachasị dị ka ụbọchị mbụ. Ụzọ dị mfe.
Ọ na-arụ ọrụ na eriri, na nke a ọ nwere eriri mita 5. Nke a na-enye anyị ohere ịgagharị n'ụlọ ahụ nke ọma ma na-enye anyị ohere dị ukwuu. N'ihe banyere ịdị arọ, ihe nlereanya a dị kilogram 4,5. N’ihi ya, ọ bụghị otu n’ime ihe ndị na-ehicha ihe dị arọ, nke mere na ọ dị mfe ịgagharị n’ụlọ ma buru ya ma ọ bụrụ na anyị aghaghị ịrịgo steepụ. Na mgbakwunye, ekele maka imewe ya na wiil, ọ dị nnọọ mkpagharị, ya mere, ọ dịghị mkpa ichegbu onwe ya ma buru ya mgbe niile. Ọ na-emepụta otu mkpọtụ dị ka ihe mkpocha ọkụ. Na mgbakwunye, ihe nlereanya a na-abịa na ngwa gụnyere.
VicTsing Cordless Vacuum Cleaner
N'ebe dị njọ, anyị na-ahụ ihe mkpocha oghere a ejiri aka. Ihe mkpocha oghere nke nha ya dị ntakịrị na nke emere ka anyị jiri ya mee ihe n'ebe ihe nhicha nkịtị enweghị ike iru. Ya mere, ọ bụ nnukwu nhọrọ iji na sofa ma ọ bụ oche ụgbọ ala. Saịtị ndị ihicha ha dị ntakịrị mgbagwoju anya ma na-achọkwa nkenke. N'ihi ihe nlereanya a, ọ ga-adị mfe karị iru ebe ndị a iji mee ka ha dị ọcha mgbe niile.
Maka obere ihe nlereanya ọ nwere ike dị ukwuu. Ya mere, ọ ga-enyere anyị aka imecha ọbụna na kasị mgbagwoju anya unyi. Ya mere, sofa ga na-egbuke egbuke mgbe niile. Na mgbakwunye, ọ dị ntakịrị ntakịrị, na-eme ka ojiji ya dị mma ma dị mfe. A na-ejikwa ya nke ọma, nke na-enyekwara aka nke ukwuu, ebe ọ bụ na ọrụ nke nhicha na mpaghara ndị a anaghị adị mfe mgbe niile. Ihe nlereanya a na-arụ ọrụ na-enweghị eriri. O nwere batrị nwere ikike nke nkeji 30 nke anyị nwere ike ịchaji.
Ọ nwere nkwụnye ego nke anyị nwere ike ịwụpụ n'oge ọ bụla na-adị mfe. Na mgbakwunye, ihicha ya na mmezi ya dị nnọọ mfe. Otu ihe ahụ na-aga maka nzacha nke gụnyere. Ọ bụ nzacha enwere ike ịsacha. Ya mere, mgbe anyị hụrụ na ọ na-efunahụ ụfọdụ ike, anyị na-asa ihe nzacha n'okpuru mgbata ahụ, hapụ ya ka ọ kpoo ma tinyeghachi ya. Ya mere, ọ na-arụ ọrụ nke ọma ọzọ. Ọ gụnyere ọtụtụ ngwa, dị ka nozzles maka elu na ọrụ dị iche iche.
N'ebe ikpeazụ, anyị na-ahụ ihe mkpochapụ nke Rowenta broom. Ọ bụ ihe atụ dị ịtụnanya n'ihi na ọ dị ike nke ukwuu, nke mere na anyị ga-enwe ike iwepụ ájá na unyi na-akwakọba n'ụlọ anyị. Ọ na-arụ ọrụ nke ọma n'ụdị niile dị n'elu ekele maka ahịhịa ya, nke e mere iji mee ya. Ya mere, ọ bụrụgodị na ị nwere ala osisi, ị nwere ike iji ya na-enweghị nchekasị. Ọ na-ekwe anyị nkwa nhicha dị irè na nke na-adịgide adịgide.
Ihe nlereanya a na-arụ ọrụ na-enweghị eriri. Ọ nwere batrị nwere oke nkeji iri anọ na ise. Oge kwesịrị ekwesị iji hichaa ụlọ ahụ dum. Ozugbo batrị agwụla, anyị na-etinye ya na chaja. Ọ na-ewe ihe dị ka awa asatọ iji chajịa nke ọma, nke nwere ike ịdị ogologo. Ya mere, ọ ka mma na-ana ya mgbe niile n'abalị. Ya mere, ị kwadebere ya n'ụtụtụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ihicha ụlọ ahụ. Ihe nlereanya a nwere tank mbughari na ikike nke 45 lita.
O nwekwara ihe nzacha HEPA nke anyị nwere ike ihicha. Ya mere, ị ga-asacha ya n'okpuru mgbata, hapụ ya ka ọ kpoo ma tinyeghachi ya. N'ihi nke a, anyị nwere ike ịnụ ụtọ ihe nhicha ahụ ọzọ dị ka a ga-asị na ọ bụ ụbọchị mbụ ọ na-eji ike na nkenke zuru oke. Banyere mkpọtụ ahụ, ọ na-eme mkpọtụ karịa ụdị ndị ọzọ na ndepụta ahụ, ọ bụ ezie na ọ bụghị ụda iwe iwe ma ọ bụ isi ọwụwa.
Dị ka anyị kwuru na mbụ, e nwere ọtụtụ ụdị ihe mkpocha ọkụ dị taa. Onye ọ bụla nwere ihe dị iche iche nke na-eme ka ọ dị mma maka ọnọdụ ụfọdụ. Ya mere, ọ dị mma ịkọwapụta ụdị ihe nchacha ọkụ anyị chọrọ ma ọ bụ na-achọ. Ebe ọ bụ na ọ ga-eme ka ọchụchọ anyị bụrụ nke ziri ezi. Anyị na-agwa gị ihe ndị ọzọ gbasara ụdị nhicha nhicha dị iche iche n'okpuru.
Ihe nhicha uzuzu uzuzu
ihe mkpocha mmiri mmiri
ihe mkpocha anụ ụlọ
2 n'ime 1 vacuum Cleaners
ulo oru agụụ Cleaners
Ihe nhicha ụgbọ ala
Ihe nhicha ikuku na-enweghị eriri
ihe nzacha mmiri
ihe nhicha ikuku cyclone
sled agụụ Cleaner
ndị na-ehicha agụụ agụụ
ndị na-ehicha oghere na-enweghị akpa
Robot vacuum Cleaner na mop
Hụ ndị na-ehicha oghere sled
Ndị a bụ ndị na-ehicha oghere nke anyị niile maara. N'echiche a, ha na-edobe nhazi na ọdịdị kpochapụ. Ọ bụ ezie na nkà na ụzụ emeela ọtụtụ ihe na ha na-abụkarị ndị ọgbara ọhụrụ ma dị ike. Ha bụ ụdị nke na-arụ ọrụ nke ọma n'ụdị niile dị n'elu na nke anyị na-abụghị nanị na-ekpochapụ uzuzu ụlọ, kamakwa ụdị unyi niile.
Hụ ihe nhicha broom
Ndị na-ehicha ihe ndị a pụtara ìhè maka iṅomi udi nke broom. Ya mere, ha kwụ ọtọ na elongated. Ha na-ejikarị ike batrị na-adịkwa ike dịtụ obere karịa ihe nchacha oghere ọdịnala. Ọ bụ ezie na ha pụtara ìhè, na-achịkwa na maka ọgwụgwọ elu ha dị ukwuu.
Hụ ihe nhicha ikuku robọt
Klas nke na-enweta ọtụtụ ọnụnọ na afọ ndị na-adịbeghị anya. Ha bụ nhọrọ dị mma nke ukwuu ebe ọ bụ na naanị ihe anyị ga-eme bụ ịhazi ya na robọt ga-elekọta anyị ụlọ ihicha. Ha na-arụ ọrụ na batrị ma na-apụta mgbe niile maka ọdịdị ha gbara gburugburu n'ụdị efere. Agbanyeghị, ha dịkwa oke ọnụ karịa igwe nhicha omenala.
Ndị a bụ ihe mkpocha oghere nwere obere nha nke ị nwere ike ijide n'aka gị nke ọma. A haziri ha ka ha rute nkuku nke ihe nhicha nkịtị anaghị erute, dị ka oche ụgbọ ala ma ọ bụ sofa. Ha nwere ike ijikwa, tụọ ntakịrị ma ọnụahịa ha na-adịkarị ọnụ ala. Ụfọdụ oghere mkpisiaka na-abịa na oghere ejiri aka arụnyere n'ime ya.
Hụ ndị na-ehicha agụụ agụụ
Hụ ihe nhicha ikuku cyclone
Cyclonic vacuum Cleaners pụtara maka imepụta ikuku nke na-eme ka ike amịpụta, na-enyere aka ikewa unyi n'ụzọ dị mfe yana kwa. anaghị akwụsị ịrụ ọrụ ka oge na-aga.
Hụ ihe mkpocha ntụ
A na-eme ụdị ihe mkpofu ndị a ka ọ na-amịpụta ntụ sitere n'ọkụ, anụ mmanya ma ọ bụ ụdị ihe omume ndị ọzọ na-eme ka mkpokọ ntụ. Ha nwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ akọwapụtara, ọ bụ ezie na ha na-amịkọrọ uzuzu na unyi. Ma isi ọrụ ya bụ ikpochapụ ntụ ma ọ bụ sawdust.
Hụ 2-na-1 ihe nhicha oghere
Ndị a bụ ndị na-ehicha oghere nke anyị na-ahụ ihe mkpocha isi na nke ejiri aka. Ha na-abụkarị ụdị broom nke na-eji ihe nhicha aka arụkọ ọrụ. Ya mere, ị nwere ike ihicha ụlọ ahụ dum nke ọma. Ebe ọ bụ na ị nwere ihe mkpochapụ maka ala na nke ọzọ maka ebe dị ka sofas ma ọ bụ akụkụ ndị na-erughị eru.
Hụ ihe nhicha agụụ na-enweghị akpa
Ọ bụ ụdị ihe mkpocha ọkụ anyị na-ahụ n'ọtụtụ ụdị. Kama inwe akpa ọdịnala ebe a na-echekwa unyi, ha nwere akpa mbughari. N'ụzọ dị otú a, mgbe ọ na-ejupụta, anyị na-ebupụ tank ahụ ma kpochaa ya. Ya mere, anyị anaghị etinye ego na akpa. Na mgbakwunye, mmezi nke nkwụnye ego ndị a dị nnọọ mfe.
Hụ ihe nhicha mmiri
Anyị na-eche ihu ụdị ihe mkpocha pụrụ iche ebe ọ bụ na ọ dị mma maka ndị nwere nsogbu na allergies na uzuzu ma ọ bụ àjà. Ọ na-enye anyị ohere ịsacha ụlọ, ma ọ na-enyekwa aka mee ka ikuku dị ọcha ekele maka nzacha mmiri ya. N'ihi ya, anyị nwere ihicha ụlọ dị omimi ma anyị na-eme ka ikuku dị ọcha dị ka o kwere mee.
Hụ ndị na-ehicha oghere ụlọ ọrụ
A na-emezi ụdị nhicha nhicha ndị a ka ọ dị ọcha na mpaghara azụmahịa, ụlọ oriri na ọṅụṅụ ma ọ bụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ ma ọ bụ n'ụlọ ọrụ. Ebe ọ bụ na ha na-apụta maka inwe ike dị ukwuu nke nwere ike ịmịkọrọ ihe niile. N'ihi ike a, a na-enweta ihicha nke ọma na nke dị irè karị. Ya mere, iji ụlọ eme ihe abụghị ụzọ kacha mma iji jiri ya mee ihe.
Ụdị kacha mma vacuum Cleaner
Mgbe anyị na-achọ ihe nhicha ọhụrụ anyị na-ele anya nke ukwuu na ika ahụ. Mgbe ụfọdụ, anyị nwere ike ịchọrọ ịzụta ụdị ụdị nke anyị nweburu ma ọ bụ anyị zọọ na ụdị ama ama. Obi abụọ adịghị ya, ika ahụ nwere mmetụta dị ukwuu n'ọtụtụ oge. Ebe ọ bụ na anyị na-ahọrọkarị ụdị nke anyị maara ma ọ bụ nke anyị tụkwasịrị obi. Nhọrọ nke ụdị dị nnọọ obosara taa, ọ bụ ezie na e nwere ụfọdụ ndị na-ahụ maka ụdị ihe nchacha ọkụ.
Polti agụụ Cleaner
Nrọ na-ehicha oghere
Ndị na-ehicha ọkụ Karcher
Ọ bụ akara ndị na-emepụta ihe na-emepụta ihe na-adịghị mma nke robots nke kacha mma. Onye na-amaghị ndị na-ehicha oghere ụlọ? Ha anọwo n'ahịa ihe dị ka afọ 25, n'ihi ya, ha nwere ahụmahụ dị ukwuu. Na mgbakwunye, robots ha na-abụkarị ndị kachasị elu na ndị na-enye ọrụ kacha mma. Yabụ ọ bụrụ na ị na-achọ igwe nhicha ikuku robot, ihe ịrụ ụka adịghị ya na ọ bụ akara ị ga-ahọrọ.
Otu n'ime ụdị ndị a kacha mara amara na ahịa. Ụlọ ọrụ nwere ahụmahụ dị ukwuu kemgbe ọtụtụ afọ, ya mere ụdị ya bụ nkwa nke ịdị mma na ịrụ ọrụ kwesịrị ekwesị. Ha na-arụpụta ọtụtụ ụdị nke agụụ na-ehicha ihe, site na sled omenala, na broom, na aka na ụfọdụ 2 na 1. Chọpụta ebe a kacha mma ụdị nke. Rowenta vacuum Cleaners.
Ụdị ọzọ nke ọtụtụ ndị ọrụ maara na nke ahụ bụkwa otu ihe na àgwà. Ha nwere ahụmahụ dị ukwuu n'ahịa ma nwee nkwado nke ndị na-azụ ahịa, ebe ọ bụ akara nke ọtụtụ ndị na-akụ n'ihi na ha maara na ha ga-achọta ngwaahịa dị mma. Ha na-arụpụta ọtụtụ ụdị ihe nhicha (broom, sledge, handheld, industrial...), ebe a ị ga-ahụ Bosch vacuum Cleaners ndị ọrụ họọrọ.
Ọtụtụ ndị nwere ike ọ gaghị ama aha ahụ, mana ha bụ ụlọ ọrụ nwere ahụmahụ na ngalaba ahụ. Na mgbakwunye, ndị karcher vacuum Cleaners Ha na-apụta maka ịme ihe mkpocha ọkụ dị ike nke na-enye nnukwu ọrụ mgbe niile. Yabụ ọ bụrụ na ị na-achọ igwe nhicha nke ike bụ isi ihe, ọ bụ otu n'ime ụdị ndị a ga-atụle. Ha na-arụpụtakwa ọtụtụ ụdị (ụlọ ọrụ, ash, ụgbọ ala, sledge ...).
Ọ bụ ika nke nnukwu akụkụ nke ndị na-azụ ahịa maara. N'ozuzu n'ihi na ọ bụ ụlọ ọrụ siri ike nke ngwaahịa ya pụtara maka ịdị mma na arụmọrụ dị mma ka oge na-aga. Yabụ zụta ihe mkpocha dysson ọ bụkwa nkwa na nhọrọ dị mma ịtụgharị na mgbe ị na-achọ ihe nhicha. Ha na-arụpụta ụdị nhicha dị iche iche (sledge, ụlọ ọrụ mmepụta ihe, aka, broom...).
Ọ bụ ezie na ndị na-ehicha oghere ecovacs ha dị ọhụrụ, nke bụ eziokwu bụ na usoro igodo ha, ngwanrọ na ọnụ ahịa asọmpi emeela ka ha bụrụ otu n'ime nhọrọ kachasị mma maka ndị na-achọ ihe nhicha ikuku robot. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịzụrụ otu, egbula oge ilele anya na ụdị ụlọ ọrụ a.
Otu esi ahọrọ ihe nchacha agụụ
Mgbe ị na-azụta ihe mkpofu, ị ga-eburu n'uche usoro nkọwa. Ebe ọ bụ na n'ụzọ dị otú a, anyị nwere ike ime mkpebi na nkenke ka ukwuu n'atụghị egwu ịzụta ihe nlereanya na-ezighị ezi. Ma, ọ dị mkpa ịtụle ha niile ma na-eche mgbe niile ihe kpọmkwem anyị na-achọ. Ihe a niile ga-eme ka ọchụchọ anyị dịkwuo mfe. Ebe ọ bụ na ọ dị mkpa icheta onye na-ehicha oghere dị ka itinye ego maka ụlọ gị, ị chọghị ịzụrụ ngwaahịa na-agaghị egbo mkpa gị.
Nkọwa ọzọ dị oke mkpa mgbe ị na-ahọrọ ihe mkpofu bụ ike. Mgbe ọ bụla anyị na-agụ nkọwapụta nke ihe mkpocha ọkụ, anyị na-ahụ na egosiri ike. Ọ bụ ezie na ọ dị mkpa ịkpọtụrụ ya, anyị ga-ewere nọmba ahụ dị ka ihe ngosi. Ọ bụghị ihe na-agwa anyị mgbe niile ma ọ bụrụ na ihe nlereanya dị ike karị.
E nwere ụdị ndị na akwụkwọ nwere obere ike na n'eziokwu ha na-achọsi ike karị. N'ihi nke a, ọ dị mma na anyị na-eburu n'uche na ọnụ ọgụgụ nke ha na-emekarị na-egosi banyere ike, ma anyị ga-ewere ya dị ka ihe na-egosi na ha n'ezie ike.
Ihe na-amasị anyị bụ na ihe na-ehicha ihe dị ike. Ebe ọ bụ na n'ụzọ dị otú a, anyị ga-enwe ike imecha na unyi na uzuzu na-agbakọta n'ụlọ ngwa ngwa na nkasi obi. Ma, anyị achọghịkwa ihe mkpofu dị ike nke ukwuu. N'ihi na nke a na-eme ka ọ na-arapara n'ahụ ụdị ọ bụla. Dị ka o kwesịrị, onye na-ehicha oghere nwere ihe na-achịkwa ọkụ. N'ụzọ dị otú a anyị nwere ike ikpebi ike anyị chọrọ iji dabere na ọnọdụ.
N'ozuzu, eriri ikuku vacuum Cleaners (ndị ejikọrọ na mains) dị ike karịa nke batrị. Ya mere, ọ bụ nkọwa zuru ezu iji tụlee. Nke a apụtaghị na ha ka mma, n'ihi na ndị na-ehicha batrị na-arụkwa ọrụ nke ọma. Mana ọ dị mkpa na anyị maara nke a ma buru nkọwa a n'uche.
Enwere nkọwa ndị ọzọ nwere ike inyere anyị aka nke ukwuu mgbe ị na-ahọrọ otu ihe mkpocha ọkụ karịa nke ọzọ. Ndị a bụ akụkụ nke nwere ike ọ gaghị enwe otu mkpa dị ka ike ma ọ bụ ika, mana nke ahụ nwekwara mmetụta na usoro mkpebi. N’ihi ya, ọ dị mkpa ka anyị buru ha n’uche.
Imegharị na ịdị mfe iji dị mkpa. Anyị chọrọ ka anyị nwee ike ịgagharị n'ụlọ ahụ nke ọma mgbe niile. Enweghị ịdọrọ ihe mkpofu agụụ ma ọ bụ na ọ dị arọ nke ukwuu. Ọzọkwa na ọ naghị akwụsị mgbe anyị na-eji ya. Ya mere, a ga-enyocha ụdị ihe ndị a. Karịsịa na ọ dịghị arọ maka gị, ebe ọ bụ na ma ọ bụghị ya, ọrụ nke nhicha ụlọ ga-esiwanye ike karịa ka ọ dị ugbu a.
Ndozi na ihicha ihe mkpofu bụ nkọwa ọzọ ị ga-eburu n'uche. Ebe ọ bụ na anyị chọrọ ihe na-adịghị achọ ogologo oge. Ọ bụrụ na anyị nwere nkwụnye ego, ihe ọtụtụ ụdị nwere, nhicha na mmezi dị mfe. Naanị wepụ tankị ahụ, kpofuo ya na mmiri ka ọ wepụ unyi ọ bụla fọdụrụnụ. Ọrụ dị mfe nke na-ewe naanị nkeji ole na ole. Na mgbakwunye, anyị na-echekwa ebe ọ bụ na anyị ekwesịghị ịzụrụ akpa.
Ọtụtụ ụdị nwere ọkụ na ihe ngosi batrị. Ihe ndị a bụ nkọwa ndị ọzọ nwere ike inyere anyị aka ime ka ojiji nke ihe mkpocha ọkụ na-arụ ọrụ nke ọma karị. Obi abụọ adịghị ya na ha bụ akụkụ dị mma na nke bara uru. Ọ bụ ezie na ha abụghị ma ọ bụ na ha ekwesịghị ịbụ mkpebi siri ike. Opekempe, ọ bụghị ma ọ bụrụ na nke ahụ pụtara na ọnụahịa nke ihe mkpocha ọkụ dị elu.
Nkọwa ọzọ dị mkpa na ihe omume na ịzụrụ ihe na-ekpo ọkụ na eriri, bụ na ị na-eburu n'uche ogologo ogologo eriri. Ebe ọ bụ na ọ nwere ike ịdị mkpụmkpụ ma nke a na-egbochi gị ọtụtụ oge n'oge ị na-eme nhicha ahụ. N'ihi na oge ọ bụla ị gbanwere ụlọ ị ga-ewepụrịrị ọzọ. Ya mere, eriri ogologo bụ nhọrọ dị mma karịa na omume.
Ndị na-ehicha oghere taa nwere ihe nzacha. Ụdị nzacha bụ ihe ọtụtụ ndị anaghị ege ntị na ya, ma ọ bụ nkọwa dị oke mkpa. N'ihi na ọ nwere ike iduga nnukwu ego na nchekwa ego. Ya mere, ọ dị mkpa ka anyị lelee ụdị nzacha nke ihe mkpofu anyị na-achọ nwere.
Nke kachasị taa bụ na ọ nwere nzacha HEPA. Ọ bụ ụdị nzacha na na-amịkọrọ ọtụtụ unyi. Mana kwa, anyị nwere ike ihicha ya ngwa ngwa ka i wee nwee ike ịnọgide na-eji ya ogologo oge. Tụkwasị na nke ahụ, ụzọ isi kpochapụ ụdị nzacha a dị nnọọ mfe. Naanị anyị ga-eji mmiri mee ya, hapụ ya ka ọ kpọọ nkụ ma tinyeghachi ya na ihe nhicha ahụ. Usoro dị mfe.
Anyị nwekwara ihe nzacha ọkụ na-acha anụnụ anụnụ, dị n'ụdị ụfọdụ ndị na-ehicha oghere dị ka nke mmiri. Enwere ike ihicha ha ma nwee ikike nnabata dị elu. Na mgbakwunye na inye aka mee ka ikuku dị ọcha. Mana ha bụ naanị na ụfọdụ ụdị ihe nchacha ọkụ.
Ndị na-ehicha oghere ndị ọzọ nwere ihe nzacha na-abụghị akwụkwọ HEPA. Enweghị ike ihicha ụdị ihe nzacha a, yabụ site n'oge ruo n'oge a na-amanye anyị ịgbanwe ha. Ihe na-adịghị mma maka ndị ọrụ. Na mgbakwunye, ọ bụ n'efu nke ego na-adịghị mkpa n'ọtụtụ ọnọdụ.
Ya mere, ọ dị mkpa ka anyị na-enyocha ụdị nzacha nke onye na-ehicha ọkụ nwere. Ebe ọ bụ nzacha nke anyị nwere ike ihicha bụ nke kacha adabara anyị.
N'ụzọ ezi uche dị na ya, ọnụahịa ahụ bụkwa nkọwa zuru oke na ndị ọrụ. Ebe ọ bụ na dabere na mmefu ego anyị, anyị nwere oke ụfọdụ na enwere ike ịnwe ụdị nke anyị enweghị ike imeli. Ya mere, ọ dị mkpa ka anyị mara ụdị ụdị anyị nwere ike iru, karịsịa n'ụdị ụfọdụ nke ihe na-ehicha ihe.
Ọ bụrụ na ị na-achọ igwe nhicha rọbọt, ọnụ ahịa na-adịkarị elu karịa ụdị nkịtị. N'ezie, n'ọtụtụ ọnọdụ, ihe karịrị euro 400. Ọ bụ ezie na e nwere ụdị ndị nwere ụdị sitere na ihe karịrị euro 200. Ya mere ọ bụ ego na-adịte aka, ebe ọ bụ na ha na-adịru ogologo oge. Ma, ọ dị mkpa ichebara ya echiche.
Enwere ihe nhicha nkịtị nke ọnụ ahịa niile. Anyị nwere ike ịchọta ndị na-ehicha oghere site na ihe dịka 80-90 euro na-enye anyị ezigbo mma. Ọ bụ ezie na nke a na-ahụkarị bụ na ha na-efu karịa 100 euro, n'etiti 100 na 200 euro anyị na-achọta ọtụtụ ụdị na ahịa. Ogologo nke enwere ụdị dị iche iche mana nke anyị nwere ike ịgagharị nke ọma karịa.
Ọ dịghị ihe na-eme ka ị kwenye?
Ọ bụrụ na ịchọtaghị ihe mkpocha nke dabara n'ihe ị na-achọ, anyị ji n'aka na ị ga-ahụ ya na nhọrọ ngwaahịa ndị a:
Chọpụta ihe mkpofu niile dị 🙂
Maka ụfọdụ ụdị ndị ọzọ akọwapụtara, dị ka ụlọ ọrụ mmepụta ihe ma ọ bụ ihe nhicha mmiri mmiri, ọnụ ahịa na-adịkarị elu karịa. Ọ bụ ezie na enweghị nnukwu ọdịiche. Ma, ọ dị mkpa ka ị mara ihe na-eme, iji zere wetara ịtụnanya n'ọdịnihu. Akụkụ dị mma bụ na ọtụtụ ụdị na-ebupụta ụdị ọnụ ala. Ka ọ dịrị ndị ọrụ niile mfe ịnweta ha.
N'ọnọdụ ọ bụla, ọ bụrụ na ihe ịchọrọ bụ ịchekwa n'ịzụta ihe nhicha ọhụrụ gị, enwere ihe omume n'ime afọ nke anyị nwere ike ịchọta onyinye dị ụtọ. Ụfọdụ n'ime ụbọchị ndị a bụ:
Black Friday na ndị na-ehicha ihe
Cyber ​​​​Monday na ndị na-ehicha oghere
Ụbọchị Prime Minister na ndị na-ehicha ihe
Ya mere, anyị na-achọta ndị na-ehicha oghere dị ọnụ ala na ahịa. Enwere ụdị ndị ọnụ ahịa ha na-amalite site na ihe dị ka euro 60 n'ọnọdụ ụfọdụ. Mana, ọtụtụ na-abụkarị na ngalaba n'etiti 100 na 200 euro. Ihe dị mma bụ na àgwà ndị na-ekpocha ọkụ taa dị elu. Ya mere, ọbụna ụdị ọnụahịa dị n'okpuru 100 euro ga-enye gị ezigbo ọrụ.
Ndị na-ehicha ọkụ ụbọchị Prime
ndị na-ehicha agụụ Friday
Detara anyị akwụkwọ
ọnụ ala agụụ ihicha 2022 - Iwu nzuzo - Ozi gbasara kuki